Nri nri oke osimiri kacha mma: Azụ na-efe efe na Cou Cou si Barbados
Location: Mbido » Ịdee » culinary » Nri nri oke osimiri kacha mma: Azụ na-efe efe na Cou Cou si Barbados
Foto sitere n'ikike nri&Cocktails
A na-ewere nri mba nke Barbados, Flying Fish na Cou Cou bụ ntụzịaka zuru oke maka ndị hụrụ nri mmiri n'anya ịnwale. A na-enye azụ̀ dị ụtọ nke na-atọ ụtọ, dị ụtọ na nke na-esi ísì ụtọ na cou cou, bụ isi Barbadian nke dabeere na ọka. Ị dịla njikere ịmụta ka esi esi nri Barbadian a n'ụlọ?
Otu esi eme Flying Fish na Cou Cou?
Nri Barbados bụ ite na-agbaze magburu onwe ya nke ekpomeekpo pụtara ìhè nke na-emetụta England, India, na Africa iji mepụta efere dị ịtụnanya, dị iche iche.
Ndị na-esi nri Bajan na-eji ọmarịcha ihe ọkụkụ ọhụrụ dị na mpaghara mepụta ụfọdụ nri kacha atọ ụtọ n'ụwa. Nri Bajan a na-ahụkarị nke ị nwere ike izute n'àgwàetiti ahụ gụnyere macaroni achịcha, achịcha azụ, osikapa na peas, conkies, ntụgharị aki oyibo, na n'ezie efere mba Barbados na-efe efe na cou cou.
N'agbanyeghị ọtụtụ nri magburu onwe ya na Barbados, taa, anyị ga-ekwu okwu banyere azụ na-efe efe na ntụziaka cou cou n'ihi na ọ bụrụ na e nwere otu efere Bajan nke ị na-agaghị achọ ịhapụ, ọ bụ nke a!
Nri mba Barbados bụ nri mara mma na nke ndị obodo na-anya isi.
Kpakpando nke ihe nkiri ahụ bụ fillet nke azụ na-efe efe nke steamed ma ọ bụ e ghere eghe, tinyere akụkụ nke cou cou, nke na-echetara polenta ma ọ bụ grits, maka ndị na-amaghị nri. Ihe ọṅụṅụ lime, ngwa nri na akwụkwọ nri ọhụrụ na-ebuli ụtọ ahụ, na-emepụta nri Bajan dị ebube.
Ọ bụrụ na ị na-eleta Barbados n'oge adịghị anya, ọ ka mma iwetara gị agụụ. Anyị ga-agwa gị ihe ndị ọzọ gbasara efere ahụ n'ime oge ole na ole, mana nke mbụ, nke a bụ ụfọdụ ndabere.
Kedu ihe bụ Flying Fish?
Azụ na-efe efe bụ ụdị azụ̀ dị n'agwaetiti Barbados. N’ezie, azụ̀ ndị a na-adịkarị n’ime mmiri nke agwaetiti ahụ nke na a na-akpọ Barbados “ala azụ̀ na-efe efe.” Yabụ, ọ gaghị abụ ihe ijuanya na azụ na-efe efe bụ isi ihe na nri mba Bajan.
Azụ na-efe efe dị ezigbo mkpa nye ndị Bajan nke na ị ga-ahụ akara na-egosi azụ na-efe efe na ego mba, na-egosipụtakwa ya na akara ngosi Barbados Tourism Authority.
Ị ka ga-ahụ azụ na-efe efe na menus na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị dị n'ofe agwaetiti ahụ. Azụ na-efe efe na-atọ ụtọ nke ukwuu esi ya ngwa ngwa, site na iji mmiri ọ juiceụ lime acid na-esi nri, yana eghe ya dịkwa mma. Gaa na ighe azụ̀ Bajan iji nwalee usoro azụ̀ na-efe efe nke ndị obodo na-enye.
Kedu ihe bụ Cou Cou?
Cou cou bụ efere ị ga-ahụ ọtụtụ ihe na Barbados, mana ọ bụghị nke juru ebe niile na ụwa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ dịtụbeghị mgbe ị nwara ya, were ya na ihe yiri polenta ma ọ bụ grits na udidi.
A na-esi na ngwakọta ọka na okra mee ya. Ngwakọta abụọ ahụ na-agbakọta ọnụ iji mepụta ụdị porridge dị ụtọ. Cou cou na Barbados bụ nri na-ekpo ọkụ ma na-akasi obi nke na-aga nke ọma na ụfọdụ efere Bajan spicier - dị ka azụ na-efe efe! Ọ dịkwa mma na nri na-esi ísì ụtọ, nke ị ga-ahụ ọtụtụ ihe na nri Bajan.
Ọtụtụ mgbe, a na-eje ozi cou cou n'ụzọ ọdịnala, nke bụ site n'ime ya ka ọ bụrụ ọdịdị oval, na-eji efere enamel. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ ezigbo eziokwu, ị ga-eji shea calabash, site na mkpụrụ osisi a na-ahụ na-eto eto n'ọhịa na okpomọkụ na America. Enwere ike ịme Cou cou site na ihe ndị ọzọ, dị ka breadfruit, ji ma ọ bụ banana green.
Azụ Flying na Ntụziaka Cou Cou
Na omenala, ndị Bajan na-esi nri a na Fraịde ma ọ bụ Satọdee, mana ọ bụrụ na ị mụta ime nke gị, ị nwere ike ijere ya ozi mgbe ọ bụla ịchọrọ! Mee ka ndị enyi gị na ndị ezinụlọ gị nwee ụtọ ụtọ nke oke okpomọkụ a. Nke a bụ ka esi eme ya.
4 fillet nke azụ na-efe efe (ọ bụrụ na nke a adịghị ebe ị bi, ị nwere ike dochie bass mmiri)
Ihe ọṅụṅụ nke wayo
Pinch nke galik ntụ ntụ
Maka isi nri:
3 eyịm mmiri
1 tsp ginger ọhụrụ
1 tbsp nke thyme epupụta
1/2 tsp agwakọta ose
100 ml nke mmanya
ohuru oji oji
1 nnukwu tomato
5 g nke thyme
10 g nke curry ntụ ntụ
5 g nke garlic ntụ ntụ
6 tbsp mmanụ olive
100g nke bọta
140 g nke ọka
Thy ọhụrụ dị ọhụrụ
Buru ụzọ mee ntụ ọka ahụ. Gwakọta ihe niile eji eme ihe na-esi ísì ụtọ, ma e wezụga maka mmanya, na ihe oriri na ihe oriri ruo mgbe agwakọta ya nke ọma. Tinye pasta ahụ n'ime ite nwere ike mechie ma tinye mmanya ahụ. Ma jijiji nke ọma na oge dị ka mmasị gị si dị. Ị ga-achọ ịhapụ nke a ihe dị ka awa abụọ tupu i jiri ya, ya mere wepụta nke a ka ị nye ya.
Gwakọta azụ ahụ na wayo, nnu na ose.
Tinye ihe oriri na-esi nri n'ime efere ihendori ma weta na-esi ísì ụtọ, na obere mmanụ. Tinye otu ngaji nke ntụ ọka ị kwadebere na mbụ.
Na pan dị iche, jikọta ihe ndị dị na cou cou, ma e wezụga maka ọka ọka, weta na obụpde. Ị ga-achọ nke a na oke ọkụ. Ozugbo esichara, gbanye ngwakọta ahụ ma tụfuo yabasị na thyme. Debe iberibe okra iji mee ihe ma emechaa.
Tinye cou cou pan na ọkụ ma gbakwunye ọka, gwakọta nke ọma ruo mgbe ị na-etolite ngwakọta siri ike. Tinye na okra.
Na efere dị njikere ije ozi! Tinye cou cou na efere ma tinye fillet azụ na ihe enyemaka dị mma nke ihendori ma nwee mmasị na Barbados! Ma ọ bụ ikekwe, depụta njem gaa na paradaịs agwaetiti a mara mma.
Site n'ikike nke Ogige akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Barbados
Ụzọ kacha mma isi detụ ụdị Barbados ụtọ bụ ịga na New Republic of Barbados!
Ozi ndị ọzọ gbasara Barbados
#Azụ na-efe efe
Ọzọ na: Barbados | Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ | Tourism | Africa
Doha Mexico City na Amman Jordan na-eme njem ugbu a Tourism|
Agwaetiti Cayman na-enweta nkwalite site na njem nlegharị anya Tourism|
Ụzọ njem North Dakota Tourism|
Ndị Caribbean na-esonyere mgbasa ozi Airbnb Live na Ọrụ n'ebe ọ bụla Tourism|
Africa Barbados Akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ Tourism
Ụlọ ndị French Champagne na-eme ememe ndekọ afọ maka ihe ọkụkụ
Jamaica ga-eso Spain bịanye aka na MOU ọhụrụ na mmepe njem nlegharị anya
Uefa nwere ike iwepụ Rọshịa nke ikpeazụ n'asọmpi Champions League...
Ụlọ nkwari akụ Arts Barcelona ewebata Ụlọ Pent
Ebe nlegharị anya kacha njọ na nke kacha mma n'ụwa
Cunard na-akọpụta ụbọchị ntinye akwụkwọ kacha arụ ọrụ n'ime afọ iri
Ụgbọ okporo ígwè Rọshịa chịrị na ndabara mgbe ọ kwụsịrị njikọ...
A na-atụ anya ka ahịa mbufe onye ọrịa ga-eru...
Nha ahịa ndị nnọchi anya Coalescing 2017 igodo zuru ụwa ọnụ...
Ngalaba Ikpe Ziri Ezi na-arịọ arịrịọ ka ewepụ ihe efu nke...
'Pụrụ iche', ekpughere ebe ihe mgbe ochie dị afọ 9,000…
Njem mmụta na ọ na-ewepụ mmalite “A...
New York City na 2022 Top 10 LGBTQ + agbamakwụkwọ…
Mkparịta ụka ụgbọ elu US Virgin Islands ga-ebili na Texas
Nghọta ọhụrụ na Natural Killer Cell of Anti-Cancer...
Ndị mmadụ anọ zọgidere ruo ọnwụ, 80 merụrụ ahụ na Bolivia…
ETF-ATCEUC: Mkparịta ụka mmekọrịta ọha na eze nke njikwa ụgbọ elu EU…
Ememme Ejiji na-adigide n'Ụbọchị Ụwa 2022
Ahịa ọgwụ egwuregwu atọrọ ka ọ gosipụta uto siri ike...
Mgbasa ozi taxi ọhụrụ na Milan na-egosi Seychelles
Ụgbọ elu Ethiopian Airlines alaghachila n'Adis Ababa…
Nchịkọta Set na-esonyere Global Hotel Alliance
Ekwuputara steeti mberede na Sri Lanka dị ka mgbochi…
Russia jiri visa ọhụrụ lekwasị anya na 'obodo ndị na-adịghị enyi'…
Ọ na-enwe mmasị ịde akwụkwọ ma na-eleba anya nke ọma na nkọwa.